Jurgen Klopp Oo Shaaciyey In Liverpool Ay Heshay Beddelka Alexander-Arnold - Gool24.Net
Jurgen Klopp Oo Shaaciyey In Liverpool Ay Heshay Beddelka Alexander-Arnold
July 26, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Liverpool waxay raadinaysaa beddelka labadeeda xiddig ee muhiimka ah ee baalaha difaaca ee Trent Alexander-Arnold iyo Andy Robertson, waxaanay hadda ku guuleysteen inay soo helaan laacibkii beddeli lahaa.
Alexander-Arnold oo u dhashay Ingiriiska iyo Robertson oo reer Scotland ah ayaa ayaa lagu tilmaamaa labada difaac ee baalaha ee ugu wanaagsan dunida, waxaanay Reds ka caawiyeen inay gacanta ku dhigto Champions League iyo Premier League.
Qaabka ay weerarka uga qayb qaataan iyo fursadaha ay u abuuraan ciyaartoyda kooxdooda ayaa gacan weyn ku lahayd guulaha waaweyn ee Liverpool ee labadii sannadood ee ugu dambeeyey.
Alexander-Arnold waxa uu kasoo baxay kulliyadda da’yarta Liverpool, halka Andy Robertson ay Liverpool kala soo wareegtay Hull City markii ay u dhaadhacday heerka labaad, waxaanu Jurgen Klopp rumaysan yahay in mustaqbalka ay suurtogal tahay inay helaan ciyaartooyo sidooda kale oo ah.
Tababaraha reer Germany waxa uu xusay in haddaba ay kooxdiisu haysato beddelka Alexander-Arnold oo uu yahay laacib da’yar oo sidiisa oo kale kasoo baxay kulliyadda kooxda, waxaanu yidhi: “Si joogto ah ayaanu uga fikirnaa xaaladdayada, waananu ognahay waxa aanu u baahanahay iyo xalalka. Neco Williams ayaa mar horeba kooxda usoo baxay oo muujiyey ifafaale, dhab ahaantiina way fiican tahay inaanu haysano.
“Xalal kale ayaanu u heli karaynaa dhibaatooyinkaas, laakiin inaanu helno Trent kale ama Robbo kale, way adag tahay, waase suurtogal, boqolkiiba boqolna waanu ka shaqaynaynaa.”